John wuxuu ka soo shaqeeyay waxna ka bartay waxbarashadda dhowrkii sano ee la soo dhaafay isagoo ka shaqeynayay Dugsiga Degmada Reedsport iyo, ugu dambeyntiina wuxuu ku qaatay magaalada Greekley macallin PE / Health Intaas ka hor, wuxuu ka shaqeeyey gelitaanka Jaamacadda Portland. Mudane Bintliff wuxuu kasbaday bachelor-kiisa jimicsiga jimicsiga jaamacada South Dakota State University iyo Masterkiisa Waxbarashada ee Concordia ee Portland, Oregon.
Mudane Bintliff wuxuu qiimeeyaa kala duwanaanta iyo sinaanta fasalka dhexdiisa una adeegsanaya inuu hubiyo jawi waxbarasho oo aamin ah oo togan. Waqtigiisa firaaqada, wuxuu ku raaxeeyaa fuulitaanka dhagaxa, akhriska, baaskiil wadista & shineemooyinka. Anigu waxaan ahay taageere isboorti oo aad u weyn (Nebraska Cornhuskers, LA Rams) oo waxaan u shaqeeyaa sidii garsoore kubada cagta waqti-dhiman ah.